Politikan'ny fikarohana - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
XY Tower dia nandinika tsara ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra ary mifikitra aminy ho toy ny fitsipika maharitra. XY Tower dia manangona vola isan-taona amin'ny fidiram-bolany ao amin'ny R&D ary nahazo "ny kaonty teknolojia avo lenta sy salantsalany" navoakan'ny governemanta eo an-toerana.
Natosiky ny politikan'ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny kalitao, ny departemanta R&D dia namboatra laboratoara maoderina izay manampy amin'ny fanatanterahana hetsika R&D isan-karazany.
Ny sampana R&D dia miasa amin'ny hevitra sy vahaolana vaovao izay inoanay fa manome lanja an'ity indostria ity ary nampiharina tamin'ny ankamaroan'ny vokatray.
Ny ekipa R&D dia noforonina injenieran'ny orinasa ambony ary ireo mpiara-miombon'antoka amintsika toa ny oniversite sy oniversite fikarohana. Ny ekipa R&D dia manao fanadihadiana lalina mba hanangonana fahitana momba ny indostrian'ny herinaratra sy ny fivoarana mitranga eo amin'ny sehatry ny vy vita amin'ny vy, ny tilikambo fampitana, ny telecom towers, ny tranom-borona ary ny kojakoja vy. Ny angona nangonina avy tamin'ny fikarohana dia voarakitra sy nodinihina mba hahafahany ampiasaina amin'ny fampandrosoana ny vokatra na ho an'ny fanovozan-kevitra fotsiny.
Miorina amin'ny tsy fivadihana
UCC dia manangona vola isan-taona ara-bola amin'ny fidiram-bolany amin'ny programa R&D amin'ny famolavolana vokatra farany sy vahaolana mifaninana amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tamin'ny alàlan'ny tetikasany napetraka, ny patanty iraisam-pirenena voasoratra anarana, dia nanolotra vahaolana mandroso sy ny fandraisany anjara, izay matetika no mpiara-miasa.